Izindaba - UGenesise KaiBiLi COVID-19 test antigen uthola izimvume eBelgium
UGenesise Ukuhlolwa kwe-antigen kwe-KaiBiLi COVID-19 thola i- izimvume ku- IBelgium
Ama-coronaviruses amanoveli angawohlobo lwe- β. I-SARS-CoV-2 yisifo esithathelwanayo sokuphefumula. Abantu bavame ukuthambekela. Njengamanje, iziguli ezitheleleke nge-coronavirus yenoveli zingumthombo oyinhloko wokutheleleka; abantu abangenwe yigciwane bangaba futhi umthombo othathelanayo. Ngokuya ngophenyo lwamanje lwezifo, isikhathi sokufukamela izinsuku ezi-1 kuye kwezingu-14, ikakhulukazi izinsuku ezi-3 kuye kwezi-7. Ukubonakaliswa okuyinhloko kufaka phakathi umkhuhlane, ukukhathala nokukhwehlela okomile. Ukucinana kwamakhala, ikhala eligobayo, umphimbo obuhlungu, i-myalgia nohudo kutholakala ezimweni ezimbalwa. I-antigen ngokuvamile iyatholakala kuma-specimens aphezulu okuphefumula ngesikhathi sesifo esibucayi. Ukuxilongwa okusheshayo kokutheleleka kwe-SARS-CoV-2 kuzosiza ochwepheshe bezokunakekelwa kwezempilo ukuthi belaphe iziguli futhi balawule lesi sifo ngendlela efanelekile nangempumelelo.
Ikhithi yokuhlola i-antigen yeKaiBiLi COVID-19 iveza ukuthi ngabe umuntu ungenwe yini manje ngegciwane le-SARS-COV-2. Lapho ukutheleleka sekuhambile, ama-antigen ngeke esaba khona.
I-KaiBiLi COVID-19 Antigen Rapid Test Kit isebenzisa i-swab eklanywe ngokukhethekile ukuthola ukuthi ngabe umuntu ungenwe yi-COVID-19 noma cha. I-swab ifakwa emakhaleni nasemlonyeni ukuze kuthathwe amasampula emgodini wamakhala nasemathanjeni.
Amasampula aqoqiwe afakwa kubhubhu yokukhipha equkethe cishe u-0.5ml wesisombululo sokulondolozwa kwamagciwane esenzelwe ngokukhethekile. Bese ubeka isampula ekhasethini lokuhlola, bese umphumela onembile uvezwe kungakapheli imizuzu engu-15.
Izilinganiso zokunemba kweKaiBiLi Antigen Test Kit zingasetshenziswa ngochwepheshe bezokwelapha ukuqinisekisa ukutheleleka okukhona njengamanje. Imininingwane eqoqwe emiphumeleni yokuhlolwa ingasetshenziswa ukuphenya ukusabalala kwegciwane, ukwazisa ngokwengeziwe izindlela zokusebenza eziphephile nokusiza ukunqanda igciwane.
Inqubo yamanje yokuhlola i-Covid-19 ingangena kakhulu futhi idle isikhathi.
IGenesis KaiBiLi COVID-19 test antigen ithola izimvume eBelgium, futhi ihambisana nezicelo ze-famhp:
• Isimemezelo sokuhambisana ne-IVD Directive (98/79 / EC);
• Isitifiketi somzimba esazisiwe (uma sikhona);
• Uhla lwamazinga (ahambisanayo) asetshenzisiwe;
• Izitifiketi ezijwayelekile ezifanele (isb. EN ISO 13485: 2016) (uma kudingeka); • Imiyalo yokusetshenziswa;
• Imininingwane ngethuluzi lokusebenza okudingeka lisetshenziswe ekuhlolweni (isb. Ukuhlolwa kwepulatifomu evulekile noma evaliwe);
• Noma iyiphi idatha efanele yokuqinisekisa ephathelene nokuhlolwa.
Isikhathi Iposi: Aug-11-2021